dhiri: bestbuy sheds $ 200 abvisa ma iphones ese - 16gb iphone 6s pasi kusvika $ 1, 64gb iphone 6s plus - $ 199.00
Kuru Nhau & Ongororo Deal: BestBuy sheds $ 200 kubvisa maPhones ese - 16GB iPhone 6s pasi kusvika $ 1, 64GB iPhone 6s Plus - $ 199.00
Deal: BestBuy sheds $ 200 kubvisa maPhones ese - 16GB iPhone 6s pasi kusvika $ 1, 64GB iPhone 6s Plus - $ 199.00
Apple iPhone 6s BestBuy Nyowani 16GB - $ 1.00 ($199.99)
64GB - $ 99.99 ($299.99)
Apple iPhone 6s Uyezve BestBuy Nyowani 16GB - $ 99.00 ($299.99)
64GB - $ 199.99 ($399.99)
Wakamboda kuzviwanira iwe iPhone 6s yedhora? Zvichida mhinduro kumubvunzo iwoyo ichave yakasimba'Ehe!'mu 99% yezviitiko zvese - mushure mezvose, ndiani akahwina & apos; kuwana iPhone ye $ 1? Nhasi, BestBuy iri kuita kuti ichi chive chechokwadi sezvo yakatsvedza kutenderera madhora mazana maviri kubva pamitengo yeVerizon uye Sprint iPhones yainayo pane ayo masherufu. Icho & chikamu chevatengesi & apos; s Nhema Chishanu kukwidziridzwa, iyo zvakare inobvumidza iwe kuti ubvute iyo iPad Pro 9.7 'ye $ 150 isingasviki!
Semuenzaniso, iyo 16GB iPhone 6s ikozvino inokumisikidza kumashure chete $ 1, pasi kubva pamutengo wenguva dzose $ 199.99 ine kirabhu yemakore maviri inosanganisirwa. Iyo 64-gig vhezheni ye6s yakadzikiswa pasi kusvika ku $ 99.99, iyo $ 200 yakatemwa pamutengo wayo wenguva dzose 299.99-madhora.
Iyo iPhone 6s Plus zvakare iri chikamu chekusimudzira - iwe unogona kuwana 16GB imwe ye $ 99.99 ine 2-gore kondirakiti, pasi kubva $ 299.99. Chekupedzisira, iyo 64 gigabyte musiyano weiyo hombe iPhone inotengesa ne $ 199.99 apo inowanzo tengesa ne $ 399.99. Zvino, izvo & izvo apos zvatinodaidzira chibvumirano!
Unogona kusarudza pakati pesarudzo dzese dzemavara, asi ita shuwa yekugadzira pfungwa dzako kana iwe uchida Space Grey kana Rose Goridhe imwe nekukurumidza, sezvo dhiri racho richizopera munguva pfupi.
sei kudzima google izwi kutsvaga
verizon s20 ultra pre order
Apple inoburitsa iOS uye iPadOS 13.6 ine CarKey, bug fixes, uye zvimwe
Samsung Galaxy S5 akasiyana eVerizon, Sprint uye T-Mobile mamaki FCC mvumo
Motorola irikuvandudza iyo Moto X Yakachena Edition kune Android 7.0 Nougat muUS